လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်က သူ့အတွက် ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရတစ်ခုကို ထုတ်ဖော်သွားခဲ့တဲ့ ယာဂန်ကလော့ - SPORTS MYANMAR
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်က သူ့အတွက် ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရတစ်ခုကို ထုတ်ဖော်သွားခဲ့တဲ့ ယာဂန်ကလော့
လီဗာပူးဟာ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဖွင့်ပွဲစဉ် အဖြစ် အေစီမီလန် အသင်းနဲ့ အန်ဖီးမှာ စတင် ရင်ဆိုင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ် အစ္စတန်ဘူဖိုင်နယ်ကို ပြန်လည် အမှတ်ရစေတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ်မှာ လီဗာပူးဟာ မီလန်ကို ပထမပိုင်းမှာ ၃ ဂိုးပြတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်နေခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒုတိယပိုင်းမှာ ၆ မိနစ် အတွင်း ၃ ဂိုး ပြန်လည် ချေပခဲ့ကာ ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်မှာ အန်ဖီးကလပ်တို့ အနိုင်ရကာ ၅ ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံလ်ိဂ်ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကလော့ဟာ အဆိုပါ ပွဲစဉ်ကို ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ပါ၀င်ခဲ့ပြီး သူ့အနေနဲ့ ပထမပိုင်း အပြီးမှာ တီဗီပိတ်ပစ်ဖို့ အတွက် စဉ်းစားခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံသွား ခဲ့ပါတယ်။
ကလော့က “အဲဒီတုန်းက ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုကိုတော့ ကျွန်တော် မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရမယ် ဆိုရင် အဲဒီညက ကျွန်တော် ဒုတိယပိုင်းကို ဆက်မကြည့်ဖို့ အတွက် စဉ်းစား ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လီဗာပူး အ၀တ်လဲခန်းထဲက လူအနည်းငယ်က လွဲပြီး ကမ္ဘာပေါ်က လူအများစုဟာ ဒီပွဲဟာ လုံး၀ ပြီးသွားပြီလို့ ကျွန်တော် ယူဆခဲ့ကြမှာပါ။ လီဗာပူးရဲ့ ပြန်လည် တိုက်ပွဲ၀င်ပုံ ကတော့ တကယ့်ကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာပါ။
ဒါပေမယ့် ဂိုးသမား ဂျာစီဒူးဒက်ဟာ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှု တစ်ချို့ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာကို ကျွန်တော် မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ သူဟာ လီဗာပူးကို ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ ရှိနေအောင် လုပ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ လီဗာပူးတို့ ၃ ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီလန်ဟာ ဒီထက် ဂိုးတွေ ပိုမို ရသင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ပွဲဟာ စောပြီးသွားမှာပါ။ ဒါဟာ အဲဒီပွဲက ကျွန်တော် မှတ်မိတဲ့ အရာတွေပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်ဟာ အေစီမီလန် ပရိတ်သတ် မဟုတ်သလို လီဗာပူး ပရိတ်သတ်လည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် ပွဲစဉ် သက်သက်ကိုပဲ ကြည့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီလန်ဟာ ဒီပွဲမတိုင်မီ ကတည်းက ရေပန်းစားတဲ့ အသင်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပွဲဟာ ပြီးသွားခဲ့သလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံး သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး ပွဲတွေထဲက တစ်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ပထမပိုင်း အပြီးမှာ တီဗီမပိတ်မိဘဲ ပွဲပြီးတဲ့အထိ ကြည့်ခဲ့တဲ့ အတွက် တကယ် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ အုပ်စုဘီမှာ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ် ၊ အေစီမီလန် ၊ ပေါ်တို စတဲ့ ထိပ်တန်း အသင်းတွေနဲ့ ကျရောက်နေခဲ့ပြီး နောက်တဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ဖို့ အတွက် အတော်လေး ရုန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးတို့ ကျရောက်နေတဲ့ အုပ်စုဘီ နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကလော့က “ကျွန်တော့် နည်းပြဘ၀မှာ အမြဲတမ်း အုပ်စုကျပ်ထဲ ကျရောက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော် လီဗာပူးကို ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အကျပ်ဆုံး အုပ်စုအဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဒေ့ါမွန်မှာ ရှိနေစဉ် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် မန်စီးတီး အိုင်ယက် တို့နဲ့ တစ်အုပ်စုတည်း ကျခဲ့တာကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ အားလုံးဟာ ‘Oh my god! ခင်ဗျားတို့ အုပ်စုအဆင့် ကနေ ဘယ်လိုများ ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာလဲ?’ ဆိုပြီး ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကစားရမှာပါပဲ။
ဒီလိုအုပ်စုဟာ ပြိုင်ပွဲအတွက် ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိသလဲ? ဒါဟာ အသင်းကောင်း ၂ သင်းကို ရှုံးထွက်အဆင့် တက်မလာနိုင်အောင် ဖယ်ရှားလိုက်တာပါပဲ။ ကျွန်တော် ချန်ပီယံလိဂ်ကို အမြဲနှစ်သက်ပါတယ်။ ဒီအုပ်စုမှာ လူတွေ ကြည့်ဖို့ တွေဝေနေရမယ့် ပွဲတစ်ပွဲမှ မရှိပါဘူး။ ဒီအုပ်စုဟာ ပထမစက္ကန့်ကနေ နောက်ဆုံး စက္ကန့်အထိ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းနေမှာပါ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ကလော့က “လီဗာပူးနဲ့ အေစီမီလန် တို့ပွဲဟာ မဖြစ်မနေ ကြည့်ရမယ့်ပွဲပါ။ ဒါဟာ ပရိတ်သတ်တွေ ကြည့်ချင်တဲ့ ပွဲမျိုးပါ။ မီလန်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ နှစ်အနည်းငယ် ဝေးကွာနေခဲ့ပေမယ့်လည်း သူတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ ကောင်းကောင်း လုပ်ပြနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အကောင်းဆုံး ကစားခဲ့ပြီး ဒုတိယနေရာ ရခဲ့သလို ဒီရာသီမှာလည်း အကောင်းဆုံး တာထွက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်သင်းစလုံး အတွက် အရမ်း ခက်ခဲမယ့်ပွဲဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ အခြား ပွဲတွေ တစ်ချို့လည်း ရှိပေမယ့် သေချာတာကတော့ လီဗာပူး vs မီလန် ပွဲဟာ ဒီထဲက တစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။”